कोरियन भाषा कसरी चाडो सिकिन्छ ? पढ्नुहोस बजिर सरको बहुउपयोगी टिप्स !-Setoghar
दिपक घिमिरे काठमाडौं मंसिर १७ पछिल्लाे समय नेपाली युवाहरुमा काेरियन भाषा प्रति अाकर्षण बढिरहेकाे छ । कोरियन भाषाप्रति नेपाली युवाको आकर्षण बढेसँगै भाषा पढ्नेको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । सानो लगानी गरेर ठुलो आम्दानी गर्न सकिने भएकाले कोरियन भाषाको क्रेज दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । अहिले युवाहरुकाे मागलाइ ख्याल गरेर देशभरका सहरी क्षेत्रमा नै कोरियन भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटहरु खुलेका छन् । देशभर १ हजार भन्दा बढी कोरियन भाषा पढाउने शैक्षिक संस्था रहेको अनुमान छ । त्यसैले भाषा सिक्दा राम्रो इन्सिच्युट रोज्नु पनि विद्यार्थीको पहिलो बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुन्छ । यसकाे लागि दक्ष भाषा प्रशिक्षक र संस्थाको खोजी गर्नुपर्छ । इन्स्टिच्युटमा कस्ता भाषा प्रशिक्षक छन्, कति वर्ष कोरिया बसेर आएको हो र यसअघि संस्थाले कति प्रतिशत रिजल्ट ल्याएको हो, एउटा कक्षामा कति जना विद्द्यार्थीहरु राखेर पढाउँछन् जस्ता कुराहरु राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । तोकिएको पाठ्यक्रममा पढाइ हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि याद गर्नुपर्छ । केही इन्सिच्युटको नियत अहिले कमाउने मात्रै देखिँदा विद्यार्थीको समय र लगानी त्यसै खेर जाने पनि गरेको छ ।
थोरै कोरियन भाषाकाे ज्ञान भएका देखि कोरियामै अध्ययन गरेर त्यहीँका प्रशिक्षकद्वारा भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युट पनि छन् । भाषा कक्षामा भर्ना हुनुअघि नै विद्यार्थीले अनुभवी र दक्ष शिक्षक भएको शैक्षिक संस्था पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षकको अनुभव, पढाउने शैली, विगतको नतिजा र कक्षाकोठाको वातावरणलाई ध्यान दिएर इन्स्टिच्युट छनोट गर्नुपर्छ । कोरियन भाषा परीक्षाको तयारीका लागिमात्र बर्सेनि देशभरका ५० हजार विद्यार्थीले करिब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ । अझ उनीहरूले परीक्षा फर्म भर्दा गरेको खर्च हिसाब गर्दा थप १५ करोड थपिएर झन्डै १ अर्ब हुन आउँछ ।
कोरियन भाषा अध्ययन गर्दा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । कोरियन भाषा परीक्षामा सबै प्रश्न वस्तुगत आउने भएकाले सकभर सम्झन वा घोक्नु जरुरी पर्छ । कोरियन भाषाको अर्थ पढ्दा उच्चारणलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ । तयारी कक्षामा पढेका विषयलाई दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर पढ्नुपर्छ । कोरियन भाषामा सबै प्रश्न वस्तुगत मात्र सोधिन्छ । कोरियन भाषाको जम्मा दुई सय अंकको परीक्षा हुन्छ, जसमा ५० प्रश्न सोधिन्छ । २५ प्रश्न पढेर र २५ प्रश्न सुनेर चिह्न लगाउनुपर्छ । कोरियन भाषामा कामदार मेरिटका आधारमा छनोट गरिन्छ । तर, साधारणतया कुल ५० प्रश्न मध्ये ४० देखि ४५ वटा प्रश्न मिलाएमा कोरियन भाषाको छनोटमा पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
कसरी सिक्ने कोरियन भाषा ?
काठमाडौ गंगबुबाट क़रीब ५०० मिटर पुर्बतिर गणेशस्थान तरकारी बजार स्थित रहेको लजिक एजुकेशन एकेडेमीका संचालक बजिर बुढाथोकी करीब १२ बर्ष कोरीया बसाईको अनुभब समेटेर नेपाल फर्के पश्चात् कोरियन भाषाको प्रशिक्षकको रुपमा नेपालका विभिन्न नाम चलेका एजुकेशन एकेडेमीहरुहरुमा अध्यापन गराउन थालेकाे लामो समय भयो l कोरियन भाषा राम्रो दख्खल भएका उनी कोरिया जानुपुर्ब माध्यमिक सम्म अध्ययन हुने एक बिद्यालयका अनुभवी गणित शिक्षकका रूपमा कार्यरत थिए l लामो समयसम्म अध्यापन पेशामा संलग्न उनी बिद्यार्थीहरुको मनोभावना र सिकाईका बिभिन्न सैद्दान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानका आधारमा अध्यापन गराउन पोख्त छन् ।
बजिरका अनुसार कोरियन भाषा कसरी चाडो सिकिन्छ ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकाे शब्दार्थ पढ्दा दोहोर्याएर पढ्ने उस्तै शब्दमा फरक छुट्याउने बानी बसाल्नु नै निकै महत्वपूर्ण हाे । शब्दार्थ बिर्सने हरुको लागि विशेष यो समस्याबाट विद्याथीहरु पीडित हुने गर्छन् । यसबाट पढेको कुरा दिमागमा नबस्दा झन् चिन्तित पार्छ । आफ्नो क्षमता कम भएको अनुभव हुन्छ । जसले असफलता बनाउँछ । यदि त्यस्तो हो भने सधै पढेको कुरालाई तपाईँले फलो गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीले त्यस्ता उपाय तल प्रस्तु गरेका छौं ।
१ अन्डरलाइन गरेर पढ्ने
कतिपयको बानी पढ्दै अन्डरलाइन गर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा अर्को पटक आफूलाई चासो लागेको विषय खोज्न सजिलो हुन्छ । परीक्षा दिने केही दिनअघि अन्डरलाइन गरेको विषय दोहोर्याउँदा सम्झन सजिलो हुन्छ ।
२ आफ्नो नोट आफैँ बनाउने
३ लेख्ने पूर्वाभ्यास
४ सर्टकट बनाएर पढ्ने
कतिपय फर्मुलाका बुँदा लामो र दिक्कलाग्दा हुन्छन् । सम्झन अप्ठ्यारो हुन्छ । इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र र गणितका सूत्र सम्झन सर्टकट बनाउँदा सजिलो हुन्छ । जस्तै गुड् म्यानेजर क्वालिटी के हो भनेर अध्ययन गर्दा मानौँ ५ वटा पाइन्ट छ भने स्मार्ट भनेर पढ्ने जसको पूरा फुलफर्म एस भनेको स्पेसिफिक, एम भनेको मेजरेबल, ए भनेकाे एचिभेवल आर भनेको रियलस्टिक, टि भनेको टाइम बाउन्डिङ हुन्छ । यसरी पढ्दा निकै सहज हुन्छ ।
५ प्रयोगात्मकमा ध्यान दिने
पढ्ने विषय पुरै थ्योरी छ भने त्यसलाई प्राक्टिकल बनाएर पढ्न सकिन्छ । मानौँ तपाईँ नेपालीको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने कथा, कविता कसरी लेख्ने अभ्यास गर्न घोकेर भन्दा अरूले लेखेका कथा कविताको किताब पढ्दा उपयोगी हुन्छ । हरेक कुरा घोक्नु भन्दा प्रयोगात्मक के गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिने हो भने पढेको कुरा बिर्सिइन्न ।
६ प्रश्नोत्तर गर्ने
साथीहरुबीच प्रश्नोत्तर गरेर पढ्दा जति फाइदा अरूमा हुन्न । सानो टिम बनाउनुस्, फर्मुला, पाेइन्ट, परिभाषा आदिबारे एकअर्कासँग सोध्नुस्, त्यसो गर्दा आफूलाई के आउँछ, आउँदैन भन्नेबारे जानकार भइन्छ । आफ्नो कमी कमजोरी भएको विषयमा थप मिहिनेत गर्न सहज हुन्छ ।
७ साथीहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्ने
पढ्दापढ्दै कुनै टपिक्स बुझिँदै बुझिएन भने त्यस्तो अवस्थामा साथीसँग सल्लाह गर्नु उत्तम हो । समूह बनाएर आ–आफूले रुचिको विषयमा छलफलगर्दा सजिलो हुन्छ । दिनैपिच्छे फरक–फरक विषयमा छलफल गर्दा अप्ठ्यारा विषय समेत सहज बन्छन् ।
८ सिम्बोल दिएर पढ्ने
कुनै कुरा ममन गर्नकाे निम्ति हरेक शब्दलाइ कुनै विशेष सिम्बाेल दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
अन्य टिप्सहरु :
सबैभन्दा पहिले अर्थहरू सबै कण्ठ हुनुपर्छ । कोरियन भाषामा एउटै शब्दको पनि बहुअर्थ लाग्ने भएकाले सबै शब्दको अर्थ कण्ठस्थ हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा शब्दको प्रयोगको आधारमा भाषा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
कोरियन भाषामा ठाउँ, परिस्थितिअनुसार शब्दको अर्थ लगाइने गरिन्छ । त्यसैले विद्यार्थीले कोरियन शब्दको एक–एक गरी अर्थ लगाउन नजानेमा पास गर्न गाह्रो हुन्छ ।
विद्यार्थीले तयारी गर्दा शब्द सुन्दै तयारी गर्दै गर्नुपर्छ । तयारी कक्षा इन्स्टिच्युटमा पढिसकेपछि आफ्ना साथीसँग छलफल गर्दै पढ्दै गर्नुपर्छ ।तयारी कक्षामा दिनमा एक घन्टा पढे पनि पुग्छ । तर, कक्षामा मात्र पढेर पास गर्न गाह्रो हुन्छ ।ईपीएस सेन्टरले वस्तुगत प्रश्नमात्र सोध्ने गर्छ । ५० प्रश्नलाई ७० मिनेटमा पूरा गर्नुपर्छ ।चित्र हेरेर, संकेत चिनेर लेख्ने, खाली ठाउँ भर्ने, वार्तालापका आधारमा लेख्ने लगायत वस्तुगत प्रश्न सोध्ने गरिन्छ । सबैभन्दा गाह्रो सुनेर लेख्ने बेलामा हुन्छ । यसैमा धेरै विद्यार्थी फेल हुन्छन् । कोरियन भाषाको सही उच्चारण नबुझ्दा गाह्रो भएको हो ।
लजिक एजुकेशन एकेडेमी नै किन ?
नि: शुल्क पुस्तकहरु उप्लब्ध गराइने l
दक्ष तथा अनुभबी शिक्षकद्वारा अध्यापन गराइने l
हेरक हप्ता नियमित परिक्षा गराइने l
कमज़ोर बिद्यार्थीहरूको लागी थप कक्षाको ब्यबस्था l
Basic र Eps Topik कोर्स बुक अध्यापन गराइने l
कोरियन शिक्षकहरूद्वारा बिशेषकोर्सको अध्यापन गराइने l
कोरियन भाषापढन यो ऐप्स डाउनलोड गर्नुहोला l